Hiran State - News: Muwadin reer Hiiraan ah oo ka sheegeynaya qaabkii ay u xirteen shaqaalaha shirkada Xawaalada Amaan qeybteeda Nairobi sanadkii tagay.
Muwadin reer Hiiraan ah oo ka sheegeynaya qaabkii ay u xirteen shaqaalaha shirkada Xawaalada Amaan qeybteeda Nairobi sanadkii tagay.
HS:-Muwadin reer Hiiraan ah oo ka sheegeynaya qaabkii ay u xirteen qaar ka mid ah shaqaalaha shirkada Xawaalada Amaana qeybteeda Nairobi sanadkii tagay xili uu ku sugnaa dalka Kenya.
Inkasta oo ay adag tahay in ay dad badan ogaadaan kaalinta ganacsatada Somaliyeed amaba shirkadaha xawaaladaha ee ka curtay dalka waxii ka danbeyey dagaaladii sokeeye amaba 21 sano ee dowlad la,anta hadane dad badan waxey dhibaato ka soo gaartay shirkadahaasi la sugayaan intii ay dalka Somaliya nabadi ka dhaceyso kuwane nasiibkaas umaba yeelan oo ifka ayaa la dhaafiyey si aysan u hadlin.
Hadaba marka Somaliweyn laga soo tago waxaa Hiiraan ka dhacay amaba shacabkeedu ahaayeen 21kii sano ee ina dhaftay kuwo ay la soo dirstay dhibatooyin kala duwan iyadoo ugu danbeyntii maalin cad la gumaaday waxgaradkii halka si bareer ah loogu bar tilmaameedsaday gudaha magaalada Belet Weyne waxgarad, aqoonyahano, nabadoono ilaa maalin cad bartamaha magaalada Belet weyne lagu xasuuqo dad kor u dhaafayo 100 ruux kadibna kuwii gumaadkaasi ka danbeyey halkii ay aamusi lahaayeen bedelkeedii dadkii ay Xasuuqeen ku tilmaamay Gaalo.
Nasiib wanaag ganacsatada Hiiraan oo xiligaasi loo arkeyey iney ka kuban doonaan dhibtaasi baaxadaasi la eg oo ay ugu yaraan wax kale hadey waayaan hormuud u noqon doonaan sidii Hiiraan loo nabadeyn lahaa taasi bedelkeeda qaar ka mid ah shaqaalaha shirkada kuwooda ku sugan dalka Kenya waxey dhiirageliyeen kuwii falkaasi ka danbeyey iyagoo ninkii xiligaasi hogaaminayey maxkamadaha oo masiibadaasi qeyb ka ahaa dalka ka soo dhoofiyey.
Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxaa hada ka sheegeynayo qaabkii ay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkada Amaana xabsiga u dhigeen muwaadinkaan inagoo soo koobeyna qaabkii ay wax u dhaceen intii aan xabsiga loo dhaadhicin.
Waxuuna hadalkiisa ku bilaabay sidan.
Waxey aheyd xili laga soo baxay salaada Cishaha anigoo ku jira qolkii aan ka dagenaa mid ka mid ah Hotelada ku yaala magaalada Nairobi, waxaa la garaacay albaabka kediba waxaan arkey iyadoo si toos ah uu nin Police ah oo u dhashay dalka Kenya iku soo fiiqayo qoray Amaanka u furan yahay kadiba qoraykii ayuu ku fiiqay meel ay dharka iisurnaayen yirina soo qaado dharkaan isagoo weydiinaya qofka la rabo inaan aniga ahey markaas qofka uu weydiinayo waa mid ka mid ah masuuliyiinta shirkada Amaana oo ninka Police-ka ah la socday waxuuna yiri nacam waa ninkaan ninkii aanu kuu shegeynay.
Waxaan ka soo baxay qolkii kadibna waxaan arkey ilaa 4 askari oo tuuto gashan oo iyaguna difaac kaka jira luuqa dheer ee Hotelka halka Hotelka hortiisa markaan imid ay indhaheygu qabteen Baabuur Police ah iyo ciidamo badan waxaana ogaaday in wax badan qaldan yahiin kadibna waxaan isku dayey in aan is dejiyo oo aanan buuq iyo qeyli midna sameyn maadama aan ogahay in aanan cidina wax dhibaato ah u geysan oo aan taganoka galay wadankana wax badan ka maqnaa.
Gaarigii leygu qaadayey oo ay Police-ka wateen oo ahaa mid uusan Batari fiican saarneyn waxaan ku kicinay jug waxaana ka mid ahaa dadkii wax ka kiciyey. intii jidka lagu siijiray ayaan waxaa jaamis u yeeshey ninkii Police-ka aha maadama ragii i xiray ay baabuurtooda soo qaateen oo ay gadaal naga daba socdeen.
Waxaan Policeka weydiiyey 3 su'aalood oo deg deg ah maadama aanan garaneyn meesha ley wado waxaana iri 1-Maxaad iku heystaan ?2-Sow wadankiina markii aan ka soo degay ikama qaadina Canshuur oo maanan bixin waxa loo yaqaano Landing Tax markii aan garoonka diyaaradaha ka soo degay? 3- Hadii adingii Police-ka ahaa ee nabadgalyada dadka wadankiina soo booqanayo inaad ilaalisaan loogu talo galay aad sidan iiku xad gudbeysaan shacabkii Kenyanka ahaa ee aan shaqeynin maxan ka filan karaa ?waxuuna yiri inagu amar ayaanu ku soconaa waxaana nala dhahay ninkaan hadii aan idiin dhahno inoo haaya 24 saac inoo haaya hadii aanu idiin dhahno xadka Somaliya oo ay gacanta kuhayaan Shabaab geeyane geeya.
Inkasta oo aanu halkan ku soo koobi karin waxii uu muwaadinkaan kala kulmay Kenya hadane wareysiga oo dheer filo goor dhaw si bal dadku u ogaadan waxa shirkadaha Xawaaladaha laga qoro in aysan been aheyn.
Mar aanu muwaadinkaan weydinay bal inuu qorsheynayo inuu dacwad ku furo shaqsiyaadka ka mid ah shirkada iyo in kale ayuu ka gaabsaday ka hadalka arintaas, walow ay wararka qaarkood sheegayaan in uusan iska jiifin lagana yaabo in mar hadii shirkada dacwo lagu furo ay adkan doonto xitaa in dadka hantida u taalo ay waqti ku helaan ay hantidooda kala baxaan.
Sida muuqata shirkadaha Xawaaladaha intooda badan shaqaalahooda wey is mahadiyeen laakinse hadii aysan dhaqalahooda iyo awooda ay dadka shacabkaa u isticmaalayan aysan u weecin dhinaca wanaagsan waxaa imaan doonto xili hantidooda si sharci ah inta looga xayiro ay ku qasbanaan doonan iney ka qeyb qaataan nabad ku soo dabaalida Hiiraan iyo Somaliweyn, maadama horey loo yiri kulu shee'in yarjicul asli.
Hadaba la soco maalmaha soo socda wareysigii oo dhameystiran, Hotelka muwaadinkaan reer Hiiraan lagala baxay, Qaabkii lagu soo deyey iyo mudada ay ku qaatatay inuu dib gacanta ugu soo dhigo dacwadii amaba Reportigii laga qoray xiligii la xirayey.
Sidoo kale muuqaal laga arki karo Hotelkii uu deganaa, Saldhigii Police-ka ee lagu xiray oo fidiyow ah oo uu ku hadlayo luqada Somaliga laakinse ay meesha hoose ku soo qormeyso English ayaanu soo bandhigi doonaa waliba xili munaasib ah oo ku haboon in bulshada loo soo bandhigo.
Mar aanu weydiinay bal waxii talo ah oo u uu soo jedin lahaa ganacsatada Hiiran ayuu mar kale ka gaabsaday laakisne jawaabta wey iska catahay waxaa loo qaatay iney dhulkooda iyo degaanada ay ka soo jeedaan nabadeeyaan sida ay sameeyeen ganacsatada Puntland iyo Somaliland halka ay indhaha ka daawanayaan dhibaatada shacabkoooda oo melkasta noloshooda laga cuuriyaamiyey hadey noqon laheyd in laga xiray Garoonkii diyaaradaha ee magaalada Belet Weyne, Isbitaalkii guud ee Belet weyne iyadoo waxaasi oo dhan ay ka danbeyaan ganacsato iyagoo kale ah oo deganadooda u ogolaaday sidii ay nabad u ahaan lahaayeen si gaancsigooda si nabadgalyo ah ugu shaqeeyo deganadooda halka kuwani ay qeyb ka yahiin dhibaatada Hiiraan taala oo ay dadka u horseedayan iney ku sii jiran duliga iyo silaca ku heysta Hiiran.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha xariga muwaadinkaan.
· admin on October 18 2011 14:33:04 · 3 Comments · 2504 Reads ·
#1 | Abdi on October 19 2011 12:34:56
Walaalayaalow waxaan aad qoreysaan ma runbaa? shirkadani waxaan ku ogaa iney ka mid tahay shirkadaha ugu nadiifsan kuwa ka howl kala Somaliya iyo wadamada Carabta.
Hadii ay runtahay waxaan ka mid ahay dadka isticmaala had iyo jeer marka yaa la aaminayaa waa yaabe.Qoraalkan hadii aad xakameysaan iyo hadii kaleba waan ka xumahay warbixintaan oo kale in ay indhaheyga ku dhacaan waana qoraalkii sedaxaad ee aan idin soodiro midkanina waa kii ugu danbeyey maadama aad kuwii hore xakameyseen.
#2 | Cumar A on October 19 2011 12:37:11
Amaana waa kuwa Hiiraan dhibta ku haya sidaan in wax looga qoro waan ku faxsanahay.
#3 | Xabibo Cismaan on October 19 2011 12:41:00
Walaahi waa arin yaabkeeda leh Aloow shacabka Hiiraan ka soo gaar dhinackasta ayaa dagaal looga wadaaye.Maxaa kuwaan siyaasad galiyey? walee kacdoonkii Carabta ka jiray shirkadahii ayuu u weecday.
War Illaah ka baqa oo dadka masakiinta ah u tura dhibtaan waa laga bixi doonaaye.
14,614,580 unique visits